መክብብ 4 NASV – Ɔsɛnkafoɔ 4 ASCB | Biblica
መክብብ 4 NASV – Ɔsɛnkafoɔ 4 ASCB
Nhyɛsoɔ, Adwumaden, Ankonam
1Bio, mehwɛ mehunuu nhyɛsoɔ a ɛrekɔ so wɔ owia yi ase:
Mehunuu wɔn a wɔredi wɔn nya no nisuo
na wɔnni ɔwerɛkyekyefoɔ biara;
tumi no wɔ wɔn nhyɛsofoɔ no nsam
na wɔnni ɔwerɛkyekyefoɔ biara.
2Na mekaa sɛ: Awufoɔ a
wɔawuwu dada no
ani gye sene ateasefoɔ;
3Na deɛ ɔyɛ sene baanu yi
ne deɛ ɔnnya mmaeɛ,
deɛ ɔnnya nhunuu bɔne a
4Na mehunuu sɛ adwumayɛ mu ɔbrɛ ne deɛ onipa tumi yɛ nyinaa nnyinasoɔ ne sɛ, nʼani bere ne yɔnko. Yei nso yɛ ahuhudeɛ, mmirika a wɔtu taa mframa.
5Ɔkwasea bobɔ ne nsa gu ne ho
6Nsa ma baako a asomdwoeɛ wɔ mu
yɛ sene nsa ma mmienu a ɔbrɛ bata ho.
Ɛte sɛ deɛ wotaa mframa.
7Afei nso mehunuu biribi a ɛnka hwee wɔ owia yi ase:
ɔnni ɔbabarima anaa onuabarima.
Nʼadwumaden amma nʼawieeɛ da,
Ɔbisaa ne ho sɛ, “Na hwan na merebrɛ ama no,
na adɛn enti na mede anigyeɛ kame me kra?”
Yei nso yɛ ahuhudeɛ,
9Baanu yɛ sene ɔbaakofoɔ,
ɛfiri sɛ wɔnya wɔn adwumayɛ so mfasoɔ a ɛsɔ ani:
ne yɔnko bɛtumi aboa no.
ɔnni ɔboafoɔ no yɛ mmɔbɔ.
11Bio, sɛ baanu da bɔ mu a, wɔka wɔn ho hye.
Na ɛbɛyɛ dɛn na ɔkɔntenkorɔ aka ne ho hye?
12Ɔbaakofoɔ deɛ, wɔbɛtumi aka no ahyɛ
Homa a wɔawɔ no mmɛsa no, wɔntumi ntete mu ntɛm.
Ɛkankɔ Yɛ Adehunu
13Ɔbabunu nyansafoɔ a ɔdi hia yɛ sene ɔhene akɔkoraa a ɔyɛ kwasea na ɔntie kɔkɔbɔ bio. 14Ebia na ɔbabunu no firi nneduafie na ɔbɛdii adeɛ anaasɛ wɔwoo no too ohia mu wɔ adehyeɛ abusua mu. 15Mehunuu sɛ wɔn a wɔtenaa ase na wɔnantee owia yi ase nyinaa dii ɔbabunu no akyi, deɛ ɔdii ɔhene no adeɛ no. 16Nnipa dɔm a wɔntumi nkane wɔn dii nʼakyi. Nanso nkyirimma no ani annye ne ho. Yei nso yɛ ahuhudeɛ, ɛte sɛ wotaa mframa.
ASCB : Ɔsɛnkafoɔ 4